Tag: tababarka iibka | Martech Zone
Tag: tababarka iibka
Marka ay meheraddaadu ka baxdo kooxaha iibka, waxaad ogaan doontaa in raadinta nuxur wax ku ool ahi uu noqdo baahi habeennimo ah. Kooxaha horumarinta ganacsiga waxay raadiyaan waraaqo caddaan ah, daraasad kiis, dukumiintiyo xirmo, soo bandhigid wax soo saar iyo adeeg… waxayna rabaan inay u habeeyaan warshadaha, biseylka macmiilka, iyo cabirka macaamiisha. Waa maxay Waxtarka Iibinta? Waxtarka iibintu waa habka istiraatiijiga ah ee lagu qalabeeyo ururada iibka qalab sax ah, nuxur ahaan, iyo macluumaad si guul leh loogu iibiyo Waxay awood siineysaa iibka
Waxay noqoneysaa waqtigaas sanadka mar kale, marka Hogaamiyaasha Iibka iyo Iibinta Ay qorsheynayaan shirarkooda sanadlaha ah ee iibka. Ma aha hawl yar. Marka lagu daro saadka aasaasiga ah ee xulashada goobta, qolalka la xirayo iyo helitaanka goobta kulanka, waxaa jira cadaadis aan la sheegin oo ku saabsan kor u qaadista shirkii sanadkii hore. Sideen uga dhigi karnaa ka sii weynaan iyo ka sii wanaagsan? Maxay ku hadlayaan martida dhiirigelin doonta? Abaalmarino noocee ah ayaa micnaheedu noqon doonaa kuwa ugu waxqabadka fiican? Anaga
Inbadan oo asxaabteyda ah waa dad iib weyn. Run ahaantii si daacad ah, weligay si buuxda uma ixtiraamin shaqadooda ilaa aan ka bilaabay ganacsigeyga oo aan ku qaatay toorey. Waxaan la yeeshay dhagaystayaal aad u wanaagsan, cilaaqaad adag oo aan la yeeshay shirkado i ixtiraama, iyo adeeg weyn oo ay u baahnaayeen. Midkoodna arrintaasi ma ahan tan labaad waxaan ka soo galay albaabka si aan ugu fadhiisto fadhi iib ah! Waxba iskama aan qaban si aan isu diyaariyo oo durba waan helay
Waxaan u muuqanaa inaan ka hadalno iibka dakhliga la soo saaray, laakiin kama hadlayno khasaaraha marka aysan si fiican u socon. Iibintu waa isboorti dhiig ee shirkadaha badankood waxayna umuuqataa in dulqaad yar uu leeyahay maalmahan xirfadlayaasha iibka inay kor uqaadaan, dhisaan xiriiro, macaamiishana badalaan. Maamulaha iibka xitaa wuxuu leeyahay jagada lama huraanka ah ee ah inuu ku dhiirigeliyo kuna kaxeeyo shaqaalaha inay la kulmaan oo ay dhaafaan yoolalka. Soo hel maareeyaha qaldan iyo gabi ahaanba